जसको आफ्नै श्रीमती र छोराले मुख सिलाए, त्यसपछि डोरीले बाँधेर रेलको लिकमा बाँधिदिए? – Hamro24News
जसको आफ्नै श्रीमती र छोराले मुख सिलाए, त्यसपछि डोरीले बाँधेर रेलको लिकमा बाँधिदिए?
July 19, 2021 adminLeaveaComment on जसको आफ्नै श्रीमती र छोराले मुख सिलाए, त्यसपछि डोरीले बाँधेर रेलको लिकमा बाँधिदिए?
झारखण्ड-मानव आफ्नैमाथि पनि कति सम्म क्रु’र हुँदो रहेछ भन्ने यो समाचारले पुष्टि गरेको छ । भारतको झारखण्डको पलामू जिल्लाबाट एउटा यस्तै क्रु’र घटना प्रकाशमा आएको छ।६५ वर्षीय भोलाराम नाम गरेका एक व्यक्ति बुधबार बिहान सिगसिगी रेलबे लिकमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
मुख सिलाइएको थियो ।पालुम जिल्लाको उन्टारी रोड पुलिस स्टेशनको भीतिहरा गाउँको मंझलीघाट टोल निवासी भोला रामले घटनाका सम्बन्धमा पुलिसलाई बताए अनुसार उनी राती पिसाब गर्नका लागि उठेका थिए । यहि समयमा केही मानिसले उनलाई समाते ।
दोस्रो पत्नी सविता देवीले पहिलो श्रीमतीको तर्फबाटका छोरा र अन्य दुई जनाले कु’टपिट गरे । त्यसपछि उसको मुखमा ज’बरजस्ती सिलाइयो । रातको करिब ११ बजे रेलवे पटरीमा लगेर डोरीले उनको हात खुट्टा बाँधिदिए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
भोलारामले आफ्नी पहिलो श्रीमतीको नि धन भएपछि सन् २०१० मा दोस्रो विवाह गरेका थिए ।सो घटनाको बारेमा पुलिसले थप अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आज खोप केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै
भिम रावलले अछामी जनतासंग माफी मागे, के भने उनले?
ट्रक र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा बाबु छोराको मृ,त्यु